Gịnị ka ihe ndina ahụ na-agbatị? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Couch stretch - mkpebi bara uru
Couch stretch - mkpebi bara uru
Gịnị ka ihe ndina ahụ na-agbatị?
Nan'ihe ndina yana-agbatị ma na-emepe eriri gị na-agbanwe agbanwe, nke na-adịkarị mkpụmkpụ ma dị mkpụmkpụ n'ihi ọtụtụ ịnọdụ ala, ịgba ịnyịnya ígwè, ma ọ bụ ịgba ọsọ. Nagbatịanwere ike inye aka igbochi mmerụ ahụ ma kwe ka ị nwekwuo ahụike n'ozuzu, ma n'uche ma n'ụzọ anụ ahụ.20 nke 20 Dec 2019
Kedu ihe na-eme, onye ọ bụla? Nabata Yoga ya na Adriene, LA Edition. Lee, m nọ na Santa Monica na achọrọ m ime obere yoga, mana m chọkwara ime obere ezumike, yabụ m kpebiri na m gaghị agakọ abụọ na Do yoga maka ndina ndina? Ya mere, maka onye ọ bụla nke ndina ndina na ndina potatas si n'ebe, nke a bụ maka gị, ụfọdụ mfe ndinyanade mbịne edinam ke n'ihe ndina gị. Ka anyị bido. (Ezigbo egwu guitar) Ọ dị mma, yabụ na mbido ị nwere ike ido onwe gị mma n'ihe ndina gị.
Mara mma ma ọ bụ? Anyị na-amalite ezigbo tọrọ atọ. Anyị ji nwayọọ nwayọọ na-amata ọkpụkpụ azụ, mana were ebe dị mma ebe a. Dabere na ihe ndina gị, ị nwere ike ịnọ ebe a ma ọ bụ ebe ọ bụla chere ọ dị mma, nri? Ma ọ bụ ikekwe ị chọrọ ịnọdụ ala ozugbo.
Ya mere, kuru ume miri emi, mechie anya gi (kuo ume) ma kuo ume ogologo oge. (ume) Onweghị ihe pụrụ iche ebe a, naanị ume dị omimi miri emi. (inhale) (iku ume) Ka anyi kuru ume miri emi (inhale) ma kuo ume m na-egwu egwu.
Ma mgbe ụfọdụ ọ bụ ihe niile ọ na - ewe, ọ bụghị ya? Obere iku ume ole na ole. Ọ dị mma, ya mere ugbu a, anyị ga-ama mma ma Nọdụ ala. Ga-aga n'ihu ma ruo na nsọtu ihe ndina gị ebe a, ma n'ezie akwa akwa ọ bụla dị iche na etu ahụ ọ dị.
Ya mere, mee ya nke gị Nwee anụrị ebe a. Ọ bụrụ na enwere okpokoro kọfị ebe ahụ ma ịnweghị ike, ma ọ bụ ma eleghị anya ị ga-aga n'akụkụ ihu slide, biri na nsọtụ ahụ, enwere ike ịnwale ya. Ọ dị mma, anyị ga-agbatị ụkwụ anyị ogologo.
Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, anyị ga-ehulata ụkwụ anyị ebe a. Ọzọkwa, ị nwere ike ịlele ihe ngosi gị mgbe ị na-eme nke a. ma ọ bụ na ị nwere ike ịgwa mmadụ okwu ma nke a bụ ụfọdụ ụdị njikọ dị ala iji chọta njikọ dị n'etiti ọkpụkpụ itukwu na ikiri ụkwụ.
Kpachara anya ka ị ghara igbochi ikpere gị ebe a. N'ihi gịnị? Ee e, anyị na-etinye uche anyị mụtara site na omume yoga anyị ọbụna ebe a n'ihe ndina ya. Nọdụ ala nke ọma.
Debe ubu gị n’ihu, elu, na azụ, naanị oge ole na ole n’ebe a. Ya mere, ụkwụ gbagọrọ agbagọ. (na-eku ume) Ana m ejide ubu m wee nọdụ ala nke ọma na ogologo. (Exhales) Chọta ihe dị nro n'obi gị, naanị ụdị mbuli ahụ na sternum anyị na-ekwu maka ọtụtụ.
Mgbe ahụ, anyị ga-ewe nke abụọ iji nyochaa olu. Choo! Echere m ma igwe na-eburu pop. Ikekwe otu okirikiri.
Ọ dịghị ihe pụrụ iche ebe a, ọ bụghị nke isiike, ọ dị mma ma dịkwa mfe. Anyị ga-eme ka ọ gaa n’ihu. Ya mere, anyị ga-eji mkpịsị aka anyị ma ọ bụ aka anyị gburugburu ụkwụ na-akpụgharị ala ọzọ na-akpachara anya ka ị ghara ịkụnye ikpere gị, karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eme ya na nkwonkwo gị.
Kwụ nọrọ kpebisie, m ji nwayọọ slide ala. M ka nwere ike ile ihe ngosi m anya. (ọchị) Ma ọ dịghị egwu egwu.
Ka anyi were ezumike kpudo isi anyị n’iru. Yabụ ana m agbatị nnukwu hamstring ebe a, nke ahụ bụ agbatị dị mma na azụ ahụ. Mgbanwe ọzọ dị iche iche ị ga-anwale ga-abụ ịdakwasị ụkwụ gị, mee ka ikpere gị gbue wee gbue ebe a, yabụ ọ dabere na ịdị elu nke ihe ndina gị na ọnọdụ gị yana n'ezie njigide nke eriri ụkwụ.
esi mee ka mitochondria dịkwuo elu
Ya mere, ọ dị ka nke a. Cool, ebe ọ bụla ị nọ, ị nwere ike ịkwụsị ikiri isiokwu maka oge nke abụọ ma were ume ume miri emi. (inhale) (iku ume) (iku ume) (iku ume) Ma mgbe ahụ anyị ji nwayọ na-agbagharị na ịlaghachi n’ihe ndina anyị.
Akwa, were ya n’akụkụ. Iru. Na site n'etiti, rute n'akụkụ nke ọzọ.
Ma laghachi n'etiti. Ọ dị mma, ugbu a na úkwù na mgbatị na-emegharị ihe na njedebe na quads. Ya mere, ka anyi nweta ukwu n’ala n’elu ute.
Onye na-akpata! Ọ bụghị n’elu ute, n’elu kapet gị, n’elu ụwa gị, n’ute ihe atụ. Anyị ga-agafe nkwonkwo ụkwụ aka nri ya na Isi nke apata ụkwụ aka ekpe, enwere m ike ịnwe ya ebe a n'apata m, mara oke mma.
Ihe ndina a dị mma ma dịkwa ala, yabụ ana m enwetala nke ọma. Enwere m ike ịnọ ebe a wee tụgharịa nkwonkwo ụkwụ m n'otu akụkụ wee bụrụ nke a na-echetara gị eriri ngwa yoga n'ihi na ị nwere ike ime ya n'ihe ndina ma ọ bụ oche. Dị mma nke ukwuu.
Ma mgbe ahụ n'ezie ị chọrọ iji ya ntakịrị miri, ị nwere ike ehulata. Ma jiri nwayọ hapụ ma gbanwee n'akụkụ nke ọzọ. Nkwonkwo ụkwụ aka ekpe gafere ụkwụ aka nri ya.
Ahh, ọ dị mma ebe a. Ọ dị ka ihe ndina dị larịị zuru oke maka hips m taa. Kpoo nkwonkwo ụkwụ gị ma ọ bụrụ na ọ dị mma, kpoo onwe gị ntakịrị, ikekwe onye nọ gị n'akụkụ ga-agbatị ụkwụ gị.
Ee eziokwu. (chịrị ọchị) Ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmikwuo ntakịrị, gbadata obi gị ntakịrị. (na-eku ume) Inhale miri emi wee weghachite iji hapụ.
Akwa. Ikpeazụ ihe. Ị dịla njikere? Anyị ga-ewere, ka anyị bido ikpere ekpe n'oge a, anyị ga-agbada ikpere aka ekpe, gawa, jiri nwayọ soro anyị gawa ụkwụ aka nri.
Ya mere enwere ike ime nke a na oche, ma dabere na ịdị elu nke ihe ndina gị enwere uru. N'ihi na m na nke a bụ ala n'ihe ndina ya mere m na-aga ọzọ nke a n'ihu nke hip n'ogige atụrụ dị ka mpekere onwa. Mgbe ị nọ n’elu ihe ndina dị elu, ị nwere ike iji ike ndọda mee ihe iji mepee onwe gị site na mgbatị gị ma nweta ọmarịcha quads gbatịa, ma jidesie ike n’elu ihe ndina gị, nke a ga-eme ka onye ọ bụla lee anya ma nwee mmetụta ntakịrị dị iche.
Naanị kpachara anya, chee echiche banyere ikpere na nkwonkwo ụkwụ, n'ezie. Anyị na-ekuru ume ume miri emi n'ebe a. Welite obi gị elu mgbe obi dị gị mma; ọzọkwa, ọ bụrụ na nke gị adịghị ka ya n’ihi ihe ndina gị ma ọ bụ n’ahụ́ gị, ị ka nwere ike ịchọta ihe na-adị mma n’ebe ahụ.
Emere m nke a na oche na mbụ, ma ọ dị mma ịhapụ naanị ibu ụkwụ ma jigide ahụ gị. (Na-eku ume na) Jụụ. Hapụ nwayọ ka anyị lelee n'akụkụ nke ọzọ.
Otu oge a na ikpere aka nri gị gbadata, ọzọkwa mgbe ị dị ndụ, mgbe ị kwụgoro ogologo, ị naghị etinyekwa ibu ọ bụla na ụkwụ gị. Really hapụrụ ya ka ọ dapụ. Ọ na-adị ezigbo mma.
Ihe ndina a dị m obere ntakịrị maka nke ahụ, yabụ, agara m, m gafere ma dọpụ ikpere m ntakịrị ka m nwee ike ịnwe ọfụma n'ihu. Welite obi gị. (Na-eku ume ma na-apụ) Mgbe ahụ anyị abịaghachi na Center azụ.
Na-echeta mgbe niile mgbe ị laghachiri, kwa. Never maghị, nri? Really chọrọ n’ezie ileba ikpere gị anya. Ma nke ahụ bụ ya! Ugbu a ị dịla njikere maka ihe ngosi gị ma ọ bụ na ị dịla njikere ịme ihe.
Olileanya, na-eche get ga-akawanye mma n'ihe ọ bụla ị ga-eme na-esote n'ihi na ị jikọtara ya na ahụ gị. Nhọrọ ọzọ na - esote bụ ị takeụ ọgwụ zuo ike, nọdụ ala n'ụkwụ, ma ọ bụ ịmara, ọkacha mmasị m, ozu ihe ndina. (chị ọchị) M ga-abụ ụghalaahịa na.
Ya mere aga m abanye n'ime akwa ebe a wee chọọ gị ọmarịcha abalị ma ọ bụ ezigbo ezumike ụbọchị, m ga-ahụ gị oge ọzọ. Na-elekọta onye ọ bụla. Namaste. (egwu guitar na-izu ike)
Kedu ihe onye nchịkwa na-agbatị?
.B.ndinyanade mbre, ma ọ bụ naanị onye na-enye gị ọzụzụ makandinyanade mbịne, Na-elekwasị anya na ịhazigharị akwara na ahụ gị ma meziwanye njem gị iji belata ihe ize ndụ gị nke imerụ ahụ ma wusi akwara gị.Eprel 15 2019
Abụ m onye nchịkwa ahụike na ahụike. Abụ m onye Ọkachamara Nyocha Ergonomic na Mahadum Vermont Medical Center. Anọ m ebe a taa iji kpọrọ gị n'ụzọ ụfọdụ.
Anyị na-eme ma Theraband ma na-enweghị Theraband. Theraband bụ ụzọ dị ọnụ ala ma dị ọnụ ala iji nwekwuo nnwere onwe ijegharị na ịgbatị yana enwere ike iji ya maka ọzụzụ ike. Ya mere enwere m olile anya na mgbe m kwuchara taa, ị nwere ike iwepụ obere ihe ma ọ bụ abụọ nke ga - enyere aka belata akwara mgbu ma ọ bụ esemokwu ụbọchị gị ma mee ka ị nwee mmetụta ọhụụ n'ụbọchị.
Ya mere, ihe m chọrọ ikpuchi taa: 1.) Anyị ga-ekwu maka etu anyị ga-esi wee gagharịa ụfọdụ iji hụ na anyị laghachitere ezigbo nyocha onwe anyị banyere ọnọdụ anyị ụbọchị. 2.) Anyị na-agafe site na mgbatị na-eso ya na-enyere aka melite ọnọdụ gị ma debe ahụike dị mma. na 3.) Anyị na-ekwu maka ụfọdụ usoro akparamàgwà na anyị nwere ike mejuputa ụbọchị niile iji mee ka ọrụ ahụ gị na ịgbatị na ụzọ ị ga-esi na-emega ahụ. Ya mere, anyị ga-amalite site n'ụdị nyocha onwe anyị nke ọnọdụ anyị. , nke bụ ihe ị nwere ike ime ụbọchị niile ma na-ege ntị na ahụ anyị, chọpụta ebe ihe mgbu na-achọpụta ma chọpụta mpaghara ndị ahụ anyị kwesịrị ịgbatị iji mee ka anyị nwekwuo ọ andụ ma nwekwuo obi ụtọ ụbọchị niile.
Ka anyị na-eme nyocha ahụike a, anyị ga na-eje ije site n'ụkwụ ruo n'isi. Ya mere, ka na-amalite na ụkwụ anyị, anyị chọrọ ijide n'aka na anyị mara mma na ezi, na ụkwụ banyere hip obosara iche. Ọ bụrụ n’abịa mgbe ị chọrọ iguzo, ị nwere ike ịme nke a ma ọ bụ ịnwere ike ịme ya ka ịnọdụ ala n’oche gị.
Mara mma ma dozie ụkwụ anyị gbasara obosara-ukwu. Ikpere anyị dị ntakịrị, ọ dị mma ma zuru ike. Ọkpụkpụ anyị, anyị chọrọ ijide n'aka na úkwù anyị nọ n'ọnọdụ na-anọpụ iche, yabụ iji banye na ọnọdụ ahụ na-anọpụ iche na hips anyị chọrọ iche banyere hips anyị dị ka bọket mmiri.
Anyị achọghị nke ahụ. Anyị achọghị ka bọket wụpụ n'ihu. Anyị chọrọ ịchọta ọnọdụ ahụ na-anọpụ iche na hip, na úkwù anyị ga-agbatị n'ikiri ụkwụ anyị, nkwonkwo ụkwụ anyị, ruo ogologo.
Ọzọ, ka anyị lelee ubu anyị. Anyị chọrọ ijide n'aka na anyị anaghị agbakọta azụ. Anyị chọrọ ka ubu ndị ahụ mara mma ma meghee.
Iji chọta ọnọdụ na-anọpụ iche nke ubu, anyị na-ese ubu anyị azụ azụ, weta ha n'ihu, ma weta ha kwụ ọtọ n'etiti ala ahụ maka ubu. Ya mere dọghachi ya, mee ka ọ gaa n’iru, ma dọghachi ya n’etiti ala ahụ, ị ​​ga-erughi ebe dị anya, ma ị gaghị agaghachi. Ọ dị mma, akụkụ ikpeazụ nke nyocha onwe anyị banyere ọnọdụ anyị bụ isi.
Anyị chọrọ ijide n'aka na isi anyị, ntị anyị na-agbado n'ubu anyị. Yabụ amaara m na ị gaghị ahụ nke a, yabụ enwere ike ịchọta onye otu ma ọ bụ enyi gị iji nyere gị aka ịtụle ọnọdụ gị ga-enyere gị aka. Yabụ na anyị chọrọ ijide n'aka na ntị anyị kwekọrọ n'ubu anyị.
Iji mee nke ahụ, aga m adọghachi isi m azụ ntakịrị. M ga-eweta ya ntakịrị, na mgbe ahụ, m ga-abịa azụ ma n'ụzọ ụfọdụ na-ahụ n'etiti ala ebe ọ na-adịghị n'elu n'elu agbanyeghị. Odi mma, ya mere ugbua oburu na ichoro, kwesiri m Enụ nti, ubu, úkwù, rida ruo na nkwukwukwukwu m.
Ọ dị mma? Yabụ nke a bụ ụzọ dị mfe ma dịkwa mfe iji nyochaa ọnọdụ gị ụbọchị niile. Yiri nnọọ mgbe ị na-anọdụ ala. Anyị chọrọ ijide n'aka na ụkwụ anyị na-adị larịị na Guzoro na ala na ikpere anyị gburugburu 90 ruo 120 ogo, obere n'ihu anyị.
Anyị achọghị ka ụkwụ anyị tọrọ n’okpuru oche anyị, ọ ga-ebelata nrugharị ọbara na akwara ụkwụ anyị. Anyị chọrọ ijide n'aka na ikpere anyị dị ihe dị ka ogo 90 ruo ogo 120. Akụkụ anyị hiwere ihe dịka ogo 90 ruo 120.
Yabụ, ịnwere ike bulie ma ọ bụ wetuo oche gị iji chọta ala ahụ. Ọ bụrụ n ’ịnọdụ ala n’oche nke na-anọ ọdụ ma ghara imegharị, o yikarịrị ka ị ga-eru nso ogo 90. Ya mere, anọ m ogo 90, úkwù m, ikpere m.
Laghachi n'ubu dị ka mgbe m na-eguzo, Achọrọ m ijide n'aka na ndị a na-anọpụ iche, dọghachi ha azụ, mee ka ha gaa n'ihu wee chọta etiti ala ebe ọ na-adịghị oke azụ na ọ bụghị oke n'ihu. Otu ihe ahụ na-aga maka isi. Anyị chọrọ ijide n'aka na ntị anyị dị n'ubu anyị na isi gị nwere ike ihulata ntakịrị.
Na isi, oge ọ bụla ị bịara inch n'ihu gị n'olu ọ na-agbakwụnye ihe dịka 10 pound nke nrụgide na spain ka anyị wee chọọ ijide n'aka na isi anyị dị mma ma na-anọpụ iche. Yabụ mgbe ị na-ede ozi n'ekwe ntị ma ọ bụ na ị bụ kọmputa, ịchọrọ ijide n'aka na isi anyị adịghị n'apata anyị, kama anyị wetara ihe ahụ na ihu anyị, na anya anyị, iji belata nrụgide na spain . Ọ dị mma, ya mere, ka anyị nyochaa nguzo guzo ọtọ. anyị nọ ọdụ.
Anyị chọrọ ijide n'aka na oche ahụ dị mma ma kwụsie ike megide ala ala anyị, anyị nwere nkwado lumbar ahụ na spain anyị. Ugbu a, anyị niile dị mma ma na-anọpụ iche, ntụgharị ọbara dị mma na ahụ dum naanị ụzọ abụọ iji chọpụta ọnọdụ, iguzo na ịnọdụ ala. N'ezie, ịnọdụ ala, ịnwere ike iji ya ọbụlagodi mgbe ị na-anya ụgbọ ala gị.
Naanị hụ na ahụ gị dabara nke ọma, anyị anaghị atụkwasị obi na njikwa njikwa etiti ma ọ bụ nwee ogwe aka. Anyị dị mma ma na-anọpụ iche, nkwonkwo anyị dị nso na ahụ na ihe niile mara mma ma dị nso na ahụ anyị. Ọ dị mma, ya mere ụfọdụ erute anyị nwere ike ime iji kwado ma ọ bụ melite nkwụsị, ka anyị bido na Theraband.
Ugbu a Theraband nke ị nwere ike inweta n'ụlọ ahịa egwuregwu mpaghara gị dị na mpaghara ya n'ịntanetị. A na-ahụkarị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị ka ike ma ọ bụ nkwụsi ike nke dị n'etiti, ọ bụghị oke ike, ọ bụghị oke ọkụ. A na-ezokarị aka ojii maka teepu siri ike karị.
Ighterdị na-acha ọkụ dị ka odo bụ nke na-eguzogide ọkụ. Jide n'aka ịchọpụta agba ị na-azụ yana site n'aka onye nrụpụta. Ha niile nwere ụkpụrụ nduzi dị iche iche.
Yabụ ịchọrọ ijide n'aka na ihe odide gị adịghị agbaji ma ọ bụ dọka. Chọrọ idebe ya n’ebe kpọrọ nkụ, dị ka akpa, ka ọ ghara ịgbaji ma gbawaa. Ọ dị mma, yabụ nke mbụ anyị ga-eme bụ naanị mmega ahụ dị mfe maka ubu, naanị imeghe ubu.
Ma ị nwere ike ịbawanye ike site na ijide mmachi n'obosara nke mmega ahụ ma ọ bụ nso. I nwekwara ike ime nke a na-enweghị bandby naanị na-eweli aka ha. Yabụ aga m aga n'ihu na teepu karịa obosara-iche, na ihe m ga - eme bụ iweta ya n'isi m, mara mma ma nwayọ nwayọ ma chịkwaa.
Ma ị ga-enwe ntakịrị esemokwu n'ubu gị, ebe ị na-enweghị ike ịga n'ihu. Jide nke ahụ wee gbadaa ozugbo. Were ume miri emi dị mma ka ị na-agbatị, na ala ọzọ.
Ọ bụrụ na ahụ erughị ala, anaghị arịgo elu na mgbatị ahụ, maọbụ ọ bụrụ na ọ dị gị mgbu, gbaa mbọ kwụsị. Nke ahụ nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke ihe dị oke njọ na nke ahụ nwere ike ịbụ ihe ị ga-akpọtụrụ na ọkachamara dibịa. Ya mere, anyị ga-eme mgbanwe na mgbatị a, anyị ga-agabiga isi ma wee jiri aka anyị kwụ ya n'azụ.
Ya mere, anyị na-arịgo, mma na nwayọ ma na-achịkwa. Mgbe anyị biliri, anyị ga-akwụsị maka nke abụọ ma anyị laghachite. Jikọta eriri ubu gị ọnụ, ọ dị mma.
Afanyekwa azụ gị. Bịa ozugbo azụ na ala. Yabụ nke a bụ ụzọ dị mma iji meghee obi gị, meghee ubu gị, wee nyere aka mee ka ọnọdụ ahụ dị elu karịa.
Otu mgbe ọzọ anyị na-arịgo elu, gbagoo, na-etinye aka n'azụ olu, pịkọta ahịhịa ubu ọnụ. Ọfọn, ozugbo azụ na n'elu. Yabụ theraband ahụ dị mma na ọ na - enyere aka idozi aka na ụkwụ na agagharị, ogwe aka abụọ na - agagharị.
Ọ bụrụ na i meghị, otu nwere ike ịgafe na ụzọ ọzọ karịa nke ọzọ. Yabụ na ọ na - enyere aka idobe aka gị abụọ n’ahịrị, ubu n’ahịrị na ịdị n’otu na aka wee mepụta ụfọdụ omume ị nwere ike iji theraband. Ọ bụrụ na ị na-arụ ọtụtụ mgbakọ na mwepụ ma ọ bụ ọrụ oke, jiri aka gị nke ukwuu, ihe ndị ị na-emegharị na ndị na-arụ ọrụ na aka gị nwere ike ịbụ obere mgbatị, obere ọnya na njedebe nke ụbọchị ma ọ bụ n'etiti ụbọchị.
Ya mere ịgbatị ọ bụla ị nwere ike ime maka ndị na-agbanwe agbanwe na ndị na-enyocha ihe dị mfe. Anyị ga-esetị aka anyị, chere ihu, nkwụ elu. Jiri aka ozo, tinye ya na nkwụ aka gị ma jiri nwayọ dọrọ aka gị azụ.
Ọ bụrụ na ahụ erughị ala ị nwere ike ehulata ntakịrị ma ọ bụ weta aka ahụ nso gị, nke a ga-ebelata ike nke mgbatị ahụ. N'ihu n'ihu, otú ahụ ka esiri gbasaa. Anyị jidere nke a ihe dị ka sekọnd ise na 10, ọ bụ naanị obere oge.
Ma zuru ike, mee nkwojiaka nkwojiaka na-apụta na elekere na aka elekere. Ehe, m, aga m agbanye aka. Nkwụpụ, jiri aka nke ọzọ weghachite aka ahụ azụ.
Chọghị ijide mkpịsị aka gị, ị nwere ike itinye ya ụfọdụ akwara na ya, ụfọdụ ụdọ na ya, yabụ ka anyị jide n'aka na anyị na-ejide ha n'aka nri ka ịgbatị ahụ ghara ịdị oke ike. Ọ bụrụ na ọ dị oke ike, anyị nwere ike ibute aka ahụ nso na ahụ anyị ma gbatịa s ka ọ belata ma ọ bụrụ na ọ karịrị akarị. Gbatia maka ise na 10 sekọnd wee zuru ike, nkwojiaka na-agagharị.
Nke ahụ pụtara n'ezie ụbọchị niile, oge awa ọ bụla, na-ebili ma na-esetị aka ntakịrị. Ugbu a, anyị ga-eme n'akụkụ nke ọzọ, ndị nyocha ahụ, yabụ anyị ga-agbatị akụkụ ahụ dị elu, aka anyị na-apụ, anyị na-agbada na ịpụ, yabụ mgbe ị na-ele igwefoto ebe a, anyị na-agbada na-apụ n’èzí, jidere azụ nke aka gị ma dọghachi ya. Dị mma ma dị mfe, dọpụta ya ihe dị ka ise na 10 sekọnd ma zuru ike, mee di na nwunye aka.
Oge a, jiri aka nke ọzọ pụọ na ahụ anyị. Jide aka anyị ozugbo na isi mkpịsị aka ahụ wee jiri nwayọ weghachi ya. Ga-eche mgbatị a n'akụkụ aka gị.
Ọzọkwa, ị nwere ike iweghachite ahụ erughị ala ọ bụla ntakịrị. Nkwojiaka na-agagharị ma zuru ike. Ọ dị mma, na-esote anyị na-eme mpịakọta ubu dị mfe iji belata nrụgide na elu trapezius ma ọ bụ n'olu, ọ dị mma? Ya mere, anyị ga-eme ihe.
Weta ubu gi na nti gi ma mee ka ubu ndi ahu gaa niru, weghachi ha na nti gi na n’iru, dikwa nma. Ugbu a, anyị na-agaghachi azụ. Anyị na-aga n’ihu, ruo na ntị, azụ na ala.
Otu oge ọzọ na-aga n’ihu, elu, azụ na ala. Ọ dị ezigbo mma. Kpoo ya ntakịrị.
Ọ dị mma, anyị emeela ahụ dị elu, ugbu a, anyị ga-eme ka ụzọ anyị gbagoo na Isi Ala. Ya mere gbatịa obere ala gị na ndị na - emegharị ahụ ntakịrị. Kwụ ga-adị ntakịrị karịa obosara-obosara iche.
Ọ bụrụ na ịchọrọ oche, ị nwere ike ijide oche ma ọ bụ okpokoro aka, aka nwere ike ịga na ala ala gị maka nkwado ma ọ bụ n'úkwù gị, m na-anọdụ ala n'obere na-anwa ịghara ile anya n'elu ụlọ, ị nwere ike ịnweta ntakịrị anya ntughari. Dabere na mgbe ahụ pụta. Ga-eche na mgbatị ahụ dị na azụ gị dị ntakịrị na ntakịrị ntakịrị na mgbatị gị.
Gaa otu oge ọzọ. Adabere na azụ, ị nwekwara ike ime nke ahụ n’oche gị. Adabere na-atụ.
Ọ dị ezigbo mma. Ya mere, anyị ga-eche na na ala mpaghara r azụ, a bit na hip flexors. Ọzọ anyị ga-arụ ọrụ anyị n'ime hamstring, n'ime mọzụlụ gluteal.
Anyị ga-eje ije otu ụkwụ n'ihu nke ọzọ Ikwesịrị iji oche, jiri azụ oche maka nkwado ma ọ bụrụ na ịnwee. Feetkwụ ya ga-eru ihe dịka otu ụkwụ iche na ihe dị ka sentimita isii n’obosara. Anyị ga-adabere na ụkwụ dị n'azụ anyị, anyị ga-atụkwa ụkwụ n'ihu, tụọ mkpịsị ụkwụ ahụ gaa na mbara igwe.
Ga-eche nke a dị n'azụ ụkwụ nke ụkwụ ụkwụ. Bendụ ebe a, chee na mgbatị a. Ọzọ, ise na 10 sekọnd, naanị mee ngwa ngwa ma zuru ike.
Ọma, gbanwee ụkwụ. Ihe dị ka otu ụkwụ iche, sentimita asatọ n’obosara. Dabere n’azụ, chee na mgbatị ahụ apata ụkwụ gị.
Yabụ ndị a bụ ụfọdụ mgbatị ahụ ị ga - eme n’ụbọchị iji meziwanye ọkwá gị, mee ka ọbara na - erugharị, ma kwe ka ikuku oxygen na - asọba n’ahụ anyị yana anyị jikwa ya. Yabụ na oge awa ọ bụla ị nọrọ, ị kwesịrị ịnwa ibili maka nkeji ole na ole iji mee mgbatị ndị a. Ije ije nzukọ bụ ụzọ ọzọ dị mma iji mee ka ọrụ gị bawanye.
Gaa na mpụga mee mgbatị dị n'èzí. Mee onye ọrụ ibe gị ma ọ bụ enyi gị sonyere gị, ọ na-atọ ụtọ mgbe niile. Ihe abuo ichoro ichota banyere ubochi gi, mmeghari mmeghari, ihe ị na eme otutu oke ma obu keyboard, anyi choro ijide n’aka na anyi wepuru aka anyi na keyboard, nkpu aka anyi na igodo keyboard.
Anyị na-ese n’elu mmiri dika onye ọkpọ. Anyị achọghị nrụgide na nkwonkwo aka anyị mgbe anyị na-ede akwụkwọ ma ọ bụ ka anyị na-akwa emo, m ga-emekwa echiche anụ ọhịa ebe a, ọtụtụ n'ime gị nwere ike iji aka nri na-akwa emo ma eleghị anya ị na-eme nke ahụ maka 10, 20, 30 afọ. Naanị nkwanye, pịa ya n'aka ekpe, ma ugbu a, anyị ewepụla nrụgide niile n'aka nri aka nri na òké gaa n'aka ekpe.
Ugbu a, anyị nwere ike iji ezi uche rụọ ọrụ n'etiti ogwe aka. Naanị obere obere ọchị. Ugboro mmeghari dị ka nke a mgbe ị na-anya ọtụtụ ga - eme ka aka gị na - eduzi gị ghara ịdị.
Jiri otu aka n’elu steeringi wiil ahụ, gbanye ogwe aka gị na sterụ ahụ ma ọ bụ mee ka aka gị abụọ dị mma ma mechie ma jigide ọnọdụ ndị a na-anọpụ iche ụbọchị niile. Olileanya na ị nwetara obere ihe ma ọ bụ abụọ ị nwere ike itinye n'ime ụbọchị gị iji nyere aka belata mgbatị ahụ ike, akwara mgbu na naanị ịbara ọbara na-aga, nweta oxygen na-asọ, ma nwee obi ụtọ ụbọchị niile. Daalụ ma nwee ọmarịcha ụbọchị.
Gini mere eji eme ka eriri di ike na-eme ka ihe mgbu laghachi?
Na mgbakwunye,uko hip flexorsbelata gịhips'ike ịgbatị mgbe ị na-eguzo ma ọ bụ na-eje ije. Ọkpụkpụ azụ nwere ike ịmalite ịkwụ ụgwọ maka enweghị ndọtị a, na-etinye nrụgide na lumbar spinal vertebrae na diski nana-akpata ihe mgbu.09.01.2021
And Bob na Brad, most Physiotherapists abụọ kachasị mara na ịntanetị ♪ - Ndewo ndị bekee, Abụ m Bob Schrupp, Physiotherapist - Brad Heineck, Physiotherapist - Anyị niile bụ ndị ọkachamara n'ihe banyere ahụike na ịntanetị - N'echiche anyị, n'ezie , Bob. - Taa, anyị ga - egosi gị otu ị ga - esi belata esemokwu na ihe mgbu na mgbatị gị na sekọnd iri itoolu, n'ihe ndina, ị makwaara ihe, enwere m obi anụrị ịhụ ihe a n'ihi na amaghị m ihe Brad na - aga mee, nke a bụụrụ m ihe ọhụrụ. Enwere m nsogbu na mgbaji ụkwụ m, m gbanye ha na ụfụfụ, m na-ahịa ha ka m nwee nnukwu obi ụtọ ịnwale Brad.
Ee, nke ahụ bụ ụzọ dị iche, ọ dị mfe karị, ma ọ na-aga kemgbe ọtụtụ iri afọ, n'ụzọ nkịtị, usoro a niile- Ọ dị mma, m ga-ahụ ya taa, m ga-eme ya, m ga-alaghachi wee kọọ ya . - Ekwulakwu, Bob. - Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị bụ onye ọhụụ na ọwa anyị, biko were nke abụọ ma denye aha anyị.
Anyị na-ebugo isiokwu otu ha si ekwu ahụike, ahụike, enweghị ihe mgbu ma anyị na-ebugo kwa ụbọchị Enweghị ohere, gaa Bobandbrad.com, gaa na mpaghara inye ego, anyị na-enye ihe mgbe niile. N'oge a anyị na-enyefe sistemụ ọkụ infrared dị ọkụ Thermotex.
Nke a dị mma, nke a bụ oke ọkụ infrared, nke pụtara na ọ naghị abanye milimita ole na ole, nke bụ ihe ọkụ ọkụ nkịtị na-eme, ọ bụ ihu - okpomọkụ nkịtị - ọ na-aga ebe ahụ - ee - ọkụ na-enwu enwu, nri? - Echere m na ọ bụ convection - convection ọkụ? - ngwugwu gị na-ekpo ọkụ, ị zụrụ ya maka nri. - $ 20 na ụlọ ahịa ọgwụ - nke mere na ọ gafere nke ukwuu, na-eme nnukwu ihe dị iche, mụ na Brad bụ nnukwu Fans, nke a bụ nke m n'ezie, etinyere m na ohiri isi, etinyere m ya n'oche m ma ọ na-enye nye m nkwado ntakịrị ma ọ na - enye m - ọ dị mma na ị ga - emecha nke ahụ, Bob - Ee, gaa Bob na Brad na Facebook, ị nwere ike ịchọta ntụtụ asọmpi ahụ n'elu peeji ahụ.
Gaa na Twitter, Instagram, ma ọ bụ Tik-Tok ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụdị nke 60 nke usoro ihe omume anyị - Wow, nke ahụ dị mma Bob - Daalụ - Ọ dị mma, ka anyị bilie site na mgbatị hip. (m etal rattles) Ya mere, hip flexor na-ehulata hip. M n’ezie na-agwa ndị ọrịa m mgbe ịlele anya n’akpa gị, ebe ị tinyere aka gị, nke ahụ bụ akwara.
Obere nkọwa zuru ezu na Sam, Sam, m bụ ebe, ị maara ebe akwara ahụ dị. Ugbu a, anyị na-akpọ ya akwara miri emi n'ihi na ọ bụ n'ụzọ miri emi. Ọ bụrụ na ị na-achọ afo gị ebe a iji rute ebe ahụ, n'ezie ị ga-akpachasị anya ma mee ka afọ gị ghara ịdị na-aga mgbe ahụ, ọ ga-abụrịrị ụfọdụ n'ime akụkụ ahụ gị.
Ihe mgbakwunye gị dị ya nso. Yabụ na ọ bụ akwara siri ike ịhịa aka. - Chọpụta. - Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ 'Enwere m ahụ ike ma achọrọ m ịhịa ya aka, ụfọdụ ndị na-agwọ ọrịa na-eme nke ahụ, n'onwe m emebeghị ya. - Onweghi m.- O siri ezigbo ike, mana ụfọdụ ndị maara nke ọma na ndị mmadụ anaghị eme ya, anaghị m akwado ya, ọ dịkwa omimi.
Mana ịchọghị usoro a. Nke ahụ bụ ihe dị mma banyere ya. Yabụ ebe a ka anyị nwere, pink bụ nke ahụ uh
Nyere m aka, Bob, enwere m - The Iliopsoas? - Ee, mana enwere ilium, nke a bụ.- Ee .Iliacus.- Ma psoas bụ akwara na-acha uhie uhie.- O doro anya- Ma akwara uhie, psoas, na-ejikọ na ngwongwo lumbar.
Ma ọ bụ ya mere enwere ike ijikọ mgbu azụ na psoas siri ike. - Ee - Ya mere o nwere ike ịdọrọ na azụ - Kpọmkwem. Na nke ahụ bụ mgbe ahụ na pelvis, na ọkpụkpụ iliac ma ọ bụ na pelvis - Chọpụta.
Nke ahụ na - ejikọta na femur, n'ime femur na ọnọdụ yana mmewere na biomechanics nke ahụ dị oke mkpa iji mee ka usoro a rụọ ọrụ - Ọ dị mma, ị nwere ike ịhụ n'akụkụ ntinye nke ị nwere ike ịhụ ebe a, ị nwere ike ịdọrọ ya hips ebe a - Kpọmkwem. - Ma ọ nwere ike ehulata. - Kpọmkwem.
Odi mma, Sam, imeela. - Daalụ. (Brad chuckles) - Ọ dị mma, yabụ ka anyị nweta teknụzụ n'onwe ya.
Yabụ ị nwere ike ime nke a na kapeeti, ị nwere ike ime ya n'ihe ndina N'ezie, ọ dịghị mkpa - You chọrọ ohiri isi ụfọdụ, Brad? - Ee, eleghị anya naanị otu, echere m. Nnaa ọ dabara ọfụma kedụ ihe ị chọrọ Gwa m akwara aka nri m bụ nke na-egbu mgbu, nke siri ike. M ga-anọdụ ala ma ọ bụ dinara ala na ihe a maara dị ka a risịrị ọnọdụ m ikpere ala. - M ga-edina ala - m ga-edina ala - cheedị etu esiri hips gị tupu usoro ahụ, emesịa, anyị ga-atụnyere ha ọzọ.
Ka anyi were ya na o sie ike, o na-ewute ya obere. Ka anyị kwuo na ọ gafee elekere ise. Iri bụ ihe mgbu kachasị njọ ị nwetụrụla, efu enweghị mgbu.
Yabụ kpọmkwem n'etiti. Ọ na-adịkwa uko. Ihe ị ga - eme bụ nke mbụ, ị ga - ezumike ma ugbu a ihe ha na - ekwu, mee dị ka a ga - asị na anyị bụ Anyị bụ onye na - agwọ ọrịa, anyị ga - eche ya wee chọta ebe ọnya ahụ, eriri dị na akwara a, ga - abụ ọzọ anyị mafere na.
Will ga-eji nwayọ welie ukwu gị, weta ikpere gị n’obi gị ma ọ bụrụ na ị na-eme, ị ga-ahụ ọnọdụ kachasị nkasi obi. Oge ụfọdụ ọ ga-adị nso dịka ị nwere ike ikpere ikpere gị n’obi. O nwere ike ịbụ na ntụziaka nke ubu gafee obi gị.
Ọ nwere ike ịdị n'akụkụ. Onye ọ bụla ga - enwe obere ntakịrị banyere ya. - Brad, mgbe ị na - ekwu ya, ugbu a ọ ga - adị mma karịa ebe a, ị naghị ekwu maka ya, ị na - ekwu maka ọnọdụ kachasị mma ozugbo ọ dọtara. kwupụta gị. - Ziri ezi.
Aka nri - Ọ dị mma, yabụ - Ebumnuche niile nke nkasi obi ọnọdụ a bụ ime ka ahụ ike belata - Chọpụta. - N'ihi na anyị ga-ahapụrịrị esemokwu ahụ - Gotcha - Ka ọbara na-abanye n'ime ahụ ike, nke na-enye ohere maka nhụjuanya mgbu na ọgwụgwọ. -Ya mere, ugbu a akwara a na-ebelata. - Obere.
Kpọmkwem. Mana oge ụfọdụ ọ ga-adịtụ mma ma i meghachi ihe ị na-eme. Ọ dị mma, otu ihe ọtụtụ mmadụ ga - achọta bụ obere ntụsara ahụ mgbe ị gbanwere apata ụkwụ gị.
Yabụ, ụkwụ m, ị ga-ahụ, ga na-aga na direction. - Na-akpali. - Yup.
Yabụ, 'makana ịmara nke ahụ- ziri ezi - na ndị na - eme mgbanwe - mpụga ntụgharị - aka nri, aka nri, yabụ anyị ga - eme ka ọ dị mkpụmkpụ. Nke a nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ maka gị ugbu a. Ọ bụrụ na ọ gafee, ị mara n’ezie ma ọ dị ya mma karịa otu ahụ, nwalee ya.
Na maka m, a na m eme ya ntakịrị, mana ọ bụghị oke ebe a, ebe a. - Ekwuru m na ihe ọjọọ, Brad, ọ bụghị ya? Ọ bụ ntụgharị dị n'ime? - Mba, ọ bụ onye na-emegharị mpụga.- M ga-echekwa banyere nke ahụ.- Nke a bụ okwu ndị na-agwọ ọrịa.- Ndo.- You gaghị amata nke ahụ.- can nwere ike ileghara ya anya.- Right, nri.- Gee ntị ka o si atọhapụ ya. - Ma mgbe ahụ i nwere ohiri isi gị, ị ga-eku ume miri emi, ị gaghị ebido ọgwụgwọ iri itoolu na abụọ ruo mgbe ị nọ n’ọnọdụ kasịnụ ma nwee ike izu ike.
M ga-anọrọ ebe a ---- Ihu, belata - Ya mere, ị na-etinye ahụ ike - nke ziri ezi - na ọnọdụ kachasị dị mkpụmkpụ - yup - nke ahụ dị mma na ọ ga-ezu ike n'ihi na nrụgide adịkwaghị - aka nri, aka nri, nke ahụ bụ echiche niile. n'etiti nrụgide Ngwọta nrụgide ma ọ bụ ịhapụ ọnọdụ.- Gotcha.- Nke nyochachara nke ọma kemgbe afọ.
Ikwesiri ileba anya na ekwentị gị, ịmara, wepu ekwentị gị ma ọ bụ na elekere na, ị ga-akwọ ụgbọala iri itoolu.- Iri itoolu.- Ma ọ dịkarịa ala.- Ee, n'ezie, ị nwere ike ịga ije ogologo .- can nwere ike ịga ije ogologo, n’ụzọ zuru oke.- mana agala obere ọ bụla.- Right.- Gotcha.- Ma mgbe ị gwụchara sekọnd iri iteghete nke a dị mkpa, emela ya.
Mba. Were oge ma hapụ ya nwayọ ma ị ga-anọgide na-adị jụụ ma na-eku ume. Ọ bụrụ n’ịchọrọ nnwere onwe imegharị ahụ, ị ​​ga.
Know mara, ị ga-arịgoro n'ihe ndina ma ọ bụ n'ihe ndina, ihe ọ bụla ị bụ, ma were oge gị. Ihe niile, ya, ị maara, ị bilie, ị gaghị eme mgbatị ụkwụ na-eme ihe ike, anyị nwekwara isiokwu na nke ahụ - So-- Anyị agaghị eme nke ahụ - wouldn't gaghị eme nke ahụ ugbu a - Right - Would ga-? n'oge ọzọ, ikekwe,? --Nri, ee, aka nri - oi.- aka nri.- Ya mere a na-eme nke a iche iche ma ha ejighi njikọ ma ọlị.- M na-ekwukwa, ọ bụrụ na ị nwere nsonaazụ ọma na nke a, nke a na ọ na-enwe obi ụtọ, ị nwere ike ọ gaghị ime- Ime ndi ozo.- hip na-agbatị.
Ọ ga-ekwe omume na ị na-amatị ​​aka nke ukwuu na ọ na-ewe iwe iwe ọkụ, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ.- Nri.- Ya mere, oge ole? You ga-emetụta ya ma m nwaa ya, Brad? - Oh, Bob, ee, kpam kpam. - Yabụ, m ga-eji ohiri isi dị iche. - Ee, pfft.
Ee, anyị achọghị ịmegharị ihe ahụ. - Eeh. - Gị bụ otu agba.
Chaị. - Ọfọn, Aga m eweta ya. Nke ahụ, na ala? - M ga- - Ma ọ bụ na elu? - Ihe obula di nma karie.- Odi.- Inweta onodu nke nkasi obi kasi.- Ya mere aga m ekwu ya.
Ya mere, na enwere m ike ịnụ ihe a ugbu a, enwere m ike ịnwe ụfụ. Ugbu a - Ọ dị mma - Ya mere, ugbu a - Ugbu a - enwere ike m ga - enweta ya n'ofe - Ọ dị mma, nke ahụ ka njọ - ọ dị mma - ọ bụkwa obere ihe ka mma. - Ọ dị mma.
Ugbu a, ka m gbanwee ya Ee, tụgharịa ya ntakịrị.- Oh, nke ahụ ga-adị mma karịa.- Nke ahụ dị? - Ee.- Lee, nke ahụ bụ, ugbu a ị bụ - Ọ ka mma.- don'tkwesighi ịhụ na Bụrụ onye na-agwọ ọrịa.
Ọ bụrụ na onye na-agwọ ọrịa nyere gị aka, ọ ga-enweta nzaghachi n'aka gị n'agbanyeghị - Chọpụta - just gaghị arịgo ebe ahụ were ya ruo ebe ụfọdụ. Ihe niile bụ nzaghachi sitere n'aka onye ọrịa - Ee, nke ahụ bụ ọnọdụ ka mma - Nke ahụ dị mma? - Oh ee - Ugbu a pịa oge - Ọfọn, m na-eme ya maka sekọnd iri na ise - Bob, Bob, ị kwuru Nke a bụ isiokwu, ọ naghị agụta. Anyị ga-pịa oge, mana ka ọ dị, ee, n'ihi na ị nwere ike ịga ije karịa 90 sekọnd. - Chọpụta. - Ya mere nke ahụ dị mma, ehee - Ọfọn, achọghị m mmadụ ọ bụla.
Lee ikuku nwụrụ anwụ ebe a ugbu a, ya mere .. .- Ọ dị mma, oge agwụla.- M ga-ebili.- Anyị ga-eme ka ọ bụrụ maka 90 sekọnd - Yabụ m ga-eji nwayọọ gbadata ya, nri? - Ee.- Apụrụ m ịhụ na n'ihi na m, ọ ga-enwete mgbe niile ma ọ bụrụ na m hapụ ya ọsọ ọsọ.- might nwere ike ijide nke a.- Ee, ee. - know mara na nke a na-arụ ọrụ maka ụfọdụ ndị- - ekwenyere m.- Ee.- Ekwenyere m. Ma were nwayọ nwayọ, ma eleghị anya ị ga-ewetu ya ala dịka ị kwuru wee wee laghachi azụ na-apụtụ ntakịrị. - Ee, nwayọ, ihe niile dị nwayọ, zuru ike.
Breathe na-eku ume, ihe niile. Ọ bụ naanị ụzọ magburu onwe ya ịgwọ - Nke a na-atọ m ụtọ n'ihi na nke ahụ bụ ihe m ga-eme na ngwụsị izu- Ee.- Mụ na nwunye m na-aga ogologo ije- Aka nri.- Ma ana m eme ya ụfọdụ m na-agbatị. ugbu a tupu m mee nke a - O doro anya na m ga - anwale nke a - Nke ahụ, mgbanwe ahụ - M ga-akọkwa azụ - Nke ahụ nwere ike ịgbanwe ndụ anyị, Bob, na ọtụtụ ndị ọzọ nọ ebe ahụ, ndị na-arụsi ọrụ ike. ..
Ọ dị gị ka nwoke ọhụụ, ọ bụghị ya? - Ee! - Mazi Bojangles.- Nke ahụ ziri ezi.- Ee. Ọ malie elu. - Ee, ee, naanị - wụfee elu - m na-ege ntị, m jụrụ Alexa ụbọchị ọzọ iji kpọọ egwu a.
Ma chere, Bob, enwere ihe ọzọ. - Ọ dị mma. - Anyị na-aga ime edemede ọzọ, enwere m obi anụrị.
Kedu ka ndị na-emegharị ahụ nwere ike isi metụta mkpịsị ụkwụ gị - Wow - Nke a ga-abụ ezigbo isiokwu. Ọ na-abịa n’abalị - nọrọ na ntanetị - maka izu ole na ole sochirinụ - nọrọ na nche - ekwula ihe ọzọ, Bob - ekele maka ikiri.
Enwere m ike ịkwụ mmadụ ụgwọ ịgbatị m?
Ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ndị mmadụ bụna-akwụ ụgwọndị ọkachamara iji nyere ha aka ịmụtagbatịama gbakee nke oma. Ọ dịghịkwa mkpa ịrụ ọrụ iji nwetagbatịannọkọ - hanwere ikeuruonye obula, dị kaonyeonye na-anọdụ ala na tebụl ụbọchị niile ma chọọ enyemaka ụfọdụ.Bọchị 9 2020
Ekele m unu, ọ bụ Dọkịta Jo, ma taa, m ga-egosi gị usoro ọgwụgwọ m kachasị elu 5 maka akwara siri ike. Ya mere, ka na-amalite. Ihe mbụ ị ga - eme mgbe ị nwere akwara siri ike bụ nke mbụ ị ga - adị ọkụ.
Ọ bụrụ na ị banye na agbatị ozugbo, ị gaghị enweta uru dị ukwuu site na ikpo ọkụ. mgbe ahụ akwara dị mma ma tọpụ ma na-ekpo ọkụ ma gbatịa ntakịrị ntakịrị. N'ihi ya, m na-achọkarị iji Aband na-ekpo ọkụ.
Yabụ ọ bụrụ na m nwee ahụ ike, ikekwe uru apata ụkwụ m, ikekwe ọbụlagodi m, m ga-ewere teepu wee tinye ya n'apata ụkwụ m ebe a wee dinara ala. Ihe m ji amasị ìgwè a bụ maka na ha na-enye gị ụfọdụ mmegide n'akụkụ dị iche iche, yabụ m ga-eme akwa mmiri, mana m ga-eme akwa ahụ. Yabụ enwere m nguzogide ụfọdụ na nke ahụ yana mgbe m biliri ọtọ.
N'ihi ya, m ka chọrọ ịhapụ ikpere m na obosara na ubu ya abụọ, m ga-anwa ime ka esemokwu ahụ bilie mgbe m rutere n'àkwà mmiri ahụ. Yabụ ọ bụrụ na ikpere m amalite na enweghị ike ijigide esemokwu ahụ, ọ nwere ike bụrụ na ọ bụ ntakịrị ihe mgbochi. mana rapara n ’ebe ahu, rute n’elu akwa mmiri ahu, weta udiri ahihia ahu di nma ma oburu n’inwere ike. ma ọ bụrụ na ị na-enweghị ike, nke ahụ bụ mma na mgbe ahụ dị mma na jiri nwayọọ ọzọ.
Aga m ebido ma eleghị anya, ị maara10. Nwere ike ịme otu na ụzọ iri nke iri ma nke a bụ ụzọ dị mma iji mee ka akwara ndị ahụ zuru ike. Ọ bụ ụdị nke a dum ụkwụ.
I nwekwara ike ibili ma jiri squat mee squats. Yabụ ị na-eji otu a iji kpoo ya ọkụ, mana ị naghị eme nnukwu mmega ahụ. Just na-eme ka uru ahụ ndị ahụ dị ọkụ.
Ya mere, mgbe ị biliri nke ọma kpoo ọkụ, ị nwere ike ịpịpụta ntakịrị. Mgbe akwara gị siri ike, oge ụfọdụ erutụghị ezuru, yabụ ị nwere ike iji ihe dị ka igwe na-arụ ọrụ iji rụpụta ya. Ya mere, ka anyị kwuo na quad m siri ike ebe a.
Achọrọ m iji osisi n'ihi na ị nwere obere njikwa. Nwere ike ịdata n'akụkụ. Enwetara m bandị IT a na quads ntakịrị.
Nwere ike nweta otu akụkụ, ịnwere ike ịnweta isi, ị nwere ike ịnweta VMO n'ime ya wee bụrụ onye ntinye. Yabụ ọ bụrụ na m jidesiri ike na mpaghara a, ọ bụ ụzọ dị mma iji tọghee ya. ọbụlagodi na achọrọ m ịga hamstring n'akụkụ a, enwere m ike ime nke ahụ kwa.
Yabụ ọ bụrụ na ị na-eji mkpanaka ala, ma ọ bụ ihe mara mma n'ihi na ọ siri ike, ọ gaghị enye ya. Yabụ na ị nwere nnukwu nrụgide, ị nwere ike bido na nkeji ma ọ bụrụ na ị nwere akwara, nke a ga - eme ya ma ị ga - eche ya, mana n'ikpeazụ ị nwere ike ịga ije ruo abụọ, atọ, ma eleghị anya ọbụna nkeji ise, site na ịpịpụta ahụ niile. Nwere ike ịbanye nwa ehi gị wee tọpụ ya nke ọma.
Yabụ ọ bụrụ na ịnweghị igwe ma ọ bụ na ị mara na ịchọrọ ntakịrị nrụgide karịa osisi ala, ị nwere ike iji igwe. Nke a dị ezigbo mma n’ihi na ị nwere ike ịhụ na o nwere ụfọdụ isi acupressure. Ozo ozo ma oburu na achoro m iweputa umu m, ma eleghi anya mkpisi ahu ezughi oke, mgbe ahu enwere m ike itinye mgbali aru.
Yabụ na enwere m ike ịtụgharị ya ma gbanyụọ akụkụ niile nwa ehi ahụ. Obere obere acupressure a na-enye mmetụ ahụ na yabụ enwere m mmetụta dị mma n'ime ha. Ma oburu na nke ahu abughi oke ihe na acupressure, i nwere ike wepu mpempe a ebe a ma jiri ihe na-emeghari.
Ugbu a, nke a abụghị igwe na-afụ ụfụfụ ị nwere ike ịhụ ebe a, mana ejiri ihe siri ike roba siri ike, dị mma ma sie ike. Yabụ nke a ga-enye gị nrụgide dị mma na akwara ndị ahụ iji rụọ ọrụ ha. ma dịka i si hụ ebe a, ejiri m ihe ole na ole dị iche iche wee ruo ugbu a ma ndị mmadụ nọ na Skyin zitere m ngwa mgbake ha.
Nke ahụ dị ezigbo mma n'ihi na mgbe ị na-arụ ọrụ nke ukwuu ma nwee akwara siri ike oge ụfọdụ, ọ dị mma iji ọtụtụ ihe n'ihi na ị maara na nke a nwere ike ịdị ukwuu maka obere akwara, nke a nwere ike ịdị mma maka otu akwara buru ibu. Know mara ma ọ bụrụ na ogwe aka gị ma ọ bụ ubu gị na-eme ya, ị nwere ike ịme ya ebe a, mana ọ nweghị ike, mana nrụgide zuru oke. Yabụ ugbu a ị nwere ike ịnweta igwe, ebe ọ bụ na nke a abụghị ụfụfụ ụfụfụ, ebe ọ bụ na ọ siri ike roba, ị chọghị ịpịpụta ihe dị ka spain gị n'ihi na ọ ga-abụ ntakịrị nrụgide dị ukwuu nke ị maara yabụ na ị nwekwara ike iji naanị ebe acupressure ebe a.
Ya mere, mgbe ị nọdụrụ ala, ị nwere ike itinye ụkwụ gị na ya. mgbe mgbe ihe niile ị nwere bụ mgbatị ahụ akwara n'ozuzu ruo n'ụkwụ, dị ka plantar fascia, plantar fasciitis, or just cramps and arches. Nọdụ ala n’oche nwere ike itinyekwu mgbakasị, nke a nwekwara ike ịme ma ọ bụrụ na ị nwere obere esemokwu na ala ala.
Ọtụtụ mgbe, egosiri na isi ihe ndị a na-enyere aka mee ka akwara nwee ike izu ike. Yabụ ị nwere ike ịdina na ya, maka ụfọdụ ndị mmadụ nke a nwere ike ghara iru ala na mbụ n'ihi na ị maara na ha bụ obere ntụpọ. ị nwere ike ịnwe mmetụta dị egwu dị otú ahụ, mana ọ bụrụ na ị dinara ebe a ogologo oge, ma eleghị anya otu nkeji ma ọ bụ nkeji abụọ, ọ na-enweta ezigbo mmetụta na-ekpo ọkụ n'ihi na ọ na-akpali mgbasa ọbara. na mgbe ọ na-adịghị enwe ezi nrugharị ọbara na akwara akwara.
Nke a bụ ezigbo ụzọ dị mma iji nwalee ihe dị iche iche ma gbaa mbọ hụ na mgbasa ọbara na-abawanye iji mee ka uru ahụ ndị ahụ pụọ. eriri ahụ dịkwa ezigbo mma, ya mere achọrọ m ịlaghachi na ya ngwa ngwa, n'ihi na ebe a ị nwere ike ịhụ na ị nwere ike ịgbanwe nha nke loops, nke ahụ na-enyekwa gị esemokwu dị iche. Yabụ na ọ nwere ebe dị iche iche ị nwere ike ịgbanwe ya nke dị mma kwa. na mgbe ahụ o nwekwara obere obere silicone abụọ n’ime ka ọ ghara amị amị.
Yabụ nke a bụ ụdị bandụ mara mma n'ezie yana ọ bụkwa akwa kama latex ka ọ dị ogologo karịa ndị otu mgbagha ndị ọzọ. Yabụ ọ bụrụ na i nwere mmasị n'ịzụrụ ihe mgbake ma hụ na pịa njikọ dị n'elu. Nke ikpeazu nke na-amasi m bu udiri ahu zuru ezu. karịsịa mgbe ị na-ewe iwe, mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịdị na-ama jijiji n'ime ụmụ ehi gị ka ị ghara ịgba ọsọ nke ukwuu, mana mgbe ị na-eme mgbatị ahụ zuru oke ị nwere ụdị esemokwu ebe niile. and eleghị anya ọkacha mmasị m dum aru gbatịa bụ ekpere gbatia.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ike ikpere ikpere gị nke ọma site n'ekpere, nke ahụ dị mma n'ala. Omume ọ bụla a ka mma n’elu ala siri ike, mana ị nwere ike ime ha n’elu akwa gị ma ọ bụ n’elu akwa. Ma ọ bụrụ na ikpere gị agaghị afụ ụfụ nke ukwuu iji gbadata otu ahụ.
Na-abanye n'okporo ụzọ ekpere ebe ị na-agbatị aka gị wee gbadata ala. Ya mere, ka ị wee hụ ebe a, agbatị m ubu m. Mgbe m nwere ubu ole na ole, m na-agbatị ukwu m, ikpere m, ọbụnakwa ụkwụ m.
Pụrụ ịhụ na ha pụta ìhè nke mere na ọ bụ n'ezie a mara mma zuru ahu gbatịa. Ọ ga-amasị gị ịhapụ nke a maka sekọnd iri atọ wee laghachi ma mee ya ugboro atọ. yabụ ị nwere ike ịmalite ebe a wee bupụta ma ọ bụ ma ọ bụrụ na nke ahụ anaghị arụ ọrụ maka gị, ikekwe ọ bụrụ na ikpere gị dị ntakịrị, ị nwere ike ibido aka gị n'ihu gị wee gbadaa azụ.
Yabụ ọ bụrụ na enweghị m ike ịga ala, m ka na-agbatịkwa ubu mara mma. Aka m na-agbatịkwa ukwu m na ikpere ya na ụkwụ m. Ya mere, ọ na-amasị m ịmecha ahụ zuru oke nke dị mma.
Ya mere, ihe ndị a bụ ọgwụgwọ ise kachasị mma m nwere maka ahụ ike. Ọ bụrụ n’inwere mmasị ịzụrụ ihe eji agbake, hụ na pịa njikọ dị n’elu. ma echefukwala ịdenye aha site na ịpị ebe a n'okpuru. ma cheta, dị njikere, nwee anụrị ma nwee olile anya na ị ga-aka mma n’oge adịghị anya.
Ije ije ọ na-enyere aka atọghe ndị na-emegharị hip?
Omume a na - emeghị ka ụwa dị ka nkwalite ụkwụ na otu mkpịsị ụkwụ na - emetụ aka na - eme ka ọ dị ike,na-eje ijeAkpa ume, akwara mputa, ikuku ikuku na icho elu ga adighi adighi akwara nile gbara ya gburugburuhips.Jenụwarị 31. Dec 2019
Kedu ka m ga-esi tọghee eriri afọ m?
Jide aka gị kwụ ọtọ n'ihu gị n'ogo obi. Jiri nwayọ bulie aka gị elu ka ị na-apịa aka gị ma jiri nwayọ na-eme ka pelvis gị gaa ihu. Nke ahụ ga - agbatị ụkwụ aka ekpe gị ma mee ka mgbatị ahụ dị na ikpere aka nri gị. You'll ga-eche nagbatịan'ihu aka ekpe gịhip.Jenụwarị 27. 2020bọchị 2020
Enyere mmadụ aka ịgbatị ya kwesịrị ya?
Ọ bụrụ na ị bụ onye mgbatị ahụ ike, ikekwe ọ bụghị. Mana ha nwere ike inye gị ahụike usoro mmezi oyi akwa ma ọ bụrụ na ị dị njikere ịkwụ ụgwọ na uru mgbanwe. Ndị na-akwado yandinyanade mbịne-nkuku klas na-ekwu na ha na-enye ihe miri emi karị, bara uru karịgbatịakarịa klaasị mgbanwe ọdịnala, dị ka yoga.Eprel 6 2018
Ego ole ka oge ịgbatị ego dị?
Ọrụ dị iche iche sitere na $ 40 ruo $ 100 (dabere na ogologo oge ịhọtara), ọ bụ ezieọtụtụioslọ nka na-enye ntakịrị iheegonchịkọta ndị na-arụ ọrụ.June 3. 2018 Nov.
Ije ije ọ na-enyere aka ime ka ọkpụkpụ gbagọọ agbagọ?
Gini mere ndi na ewebata m si sie ike?
Osteitis Pubis na-etolite mgbe ihe na-adịghị mma biomechanics, usoro na otu ị si emegharị ahụ gị, buru oke ibu ma bufee gị ahụndị ntinye. Ọrụ gị gabigara ókèndị ntinyedaa mba ma daa mba. Mgbatị a dị elu na-adọta na mgbakwunye uru ahụ na ọkpụkpụ ahụ, na-eme ka mmebi nke usoro mmekọrịta nke mmadụ.